Nuno Dala, Mpikatroka Angolais, Nitokona Tsy Nihinan-kanina Nandritra Ny 15 Andro. · Global Voices teny Malagasy
Nuno Dala, Mpikatroka Angolais, Nitokona Tsy Nihinan-kanina Nandritra Ny 15 Andro.
Voadika ny 04 Avrily 2016 2:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, polski, русский, Nederlands, Español, Italiano, Português
Nuno Dala nitokona tsy nihinan-kanina nanomboka ny 10 martsa. Sary: Central Angola
Nuno Dala, mpampianatra iray ao amin'ny anjerimanontolo, nitokona tsy nihinan-kanina nandritra ny 15 andro. Ilay mpikatroka, nifonja nanomboka ny volana jona 2015, dia anisan'ireo tsaraina miaraka amin'ireo mpikatroky ny “15+2″ nampangain'ireo manampahefana angoley ho nikasa hanao fikomiana. Amin'ireo 17 voafonja, ny 15 amin'ireo dia voatazona maherin'ny 90 andro tsy misy fiampangana. Ireo hafa kosa, tanora roa Angoley, no arahi-maso akaiky any an-tranon'izy ireo. Ny volana desambra, napetraky ny tribonaly ho amin'ny toerana voaara-maso ireo mpikatroka 15, raha toa ka mbola mitohy ny fitsarana izay nanomboka tamin'ny 15 novambra.
Tanatin'ny tafatafa iray tao amin'ny onjam-peo DW – África, milaza ny anabavin'i Nuno Dala fa “ratsy” ny toe-pahasalaman'ny anadahiny. Nanomboka nitokona tsy nety nihanan-kanina i Dala mba hitakiana ny fahazoany ireo fitaovany manokana izay eo ampelatanan'ireo manampahefana. Ilay mpikatroka, izay natokana natao andrimaso nanomboka ny volana desambra teo, dia nogadraina ny volana martsa vokatry ny didy avy amin'ny tribonaly. Malahelo ny anabaviny fa ataon'ny fiarahamonina “tsinontsinona ny fahasalaman’ “ny anadahiny. Nanazava ny DW fa:
Any anatin'ireo tambajotra sosialy, mitombo ireo tsikera mikasika ny fomba fandraisan'ny fiarahamonina sy ireo masoivoho mpilaza vaovao ny fitokonan'i Nuno Dala tsy nety nihinan-kanina. Maro ireo nampitaha izany tamin'ny trangan'i Luaty Beirão, izay nitarika ireo fihetsiketsehana sy fanagonantsonia tao anaty sy ivelan'i Angola.
Nanaraka akaiky io tranga io ny masoivoho CentralAngola 7311 :
Angola: ny mpikatroka Nuno Álvaro Dala taorian'ny fito andro nitokonana tsy nihinanan-kanina http://dlvr.it/KplKVr
Ary nanao antso avo tao tamin'ny Facebook izy, mba hisian'ny hetsika mafonja kokoa avy amin'ny vahoaka:
Miditra amin'ny fahefatra ambinifolo andro tsy nihinanan-kanina fa rano fotsiny no nosotroina izy, serôma am-bava, dité sy ranom-boankazo, tsy mitelina ventin-kanina. Rahoviana no hanomboka ireo fanangonan-tsonia, ireo mpanao sonia, ireo fiaretantory? Rahoviana no haka toerana ny hakiviana?
Tonga dia avy hatrany ny vokany. Ny androtr'io ihany, nokarakaraina ireo fiaretantory ho an'i Nuno Dala tao Luanda tamin'ny 25, 26, ary ny 27 martsa.
Izay no hetsiky ny olom-pirenena. Ho tsara kokoa ny mandray anjara amin'io ho an'ireo izay nandefa ireo fanevatevàna namely ny hetsiky ny fiarahamonina sivily.
25, 26 ary ny 27-n'ny volana martsa, ao amin'ny Fiangonana Sainte Famille, amin'ny 5ora 30 minitra hariva.
Tsy misy tokony hiandrasana ny andro farany mba hijerena raha hiafara amin'ireo lako sy basiranon'ny mpitandro filaminana ireo andro voalohany.